Samsung manapaka ny drafitra rehetra amin'ny alàlan'ny findainy mivalona sy "Infinity" | Androidsis
Tao anatin'izay roa taona nisian'ny Notch izay dia tany an'ala i Samsung mba handalo tanteraka ilay endrika "fanavaozana" nananan'i Apple sy ireo marika Android rehetra nanaraka azy. Nahaliana ny nahita ny fomba nijanonan'ny orinasa Koreana ho marina tamin'ny tenany, ka ora vitsy lasa izay dia nanao hadalana tamin'ny fifaninanana rehetra aho miaraka amin'ny notches.
Navelany tamin'ny fomba mahatsikaiky fotsiny izany noho ny zava-misy roa: ny fampisehoana finday mivalona sy ny endrika "Infinity" an'ny efijery Galaxy S10 izay manova tanteraka ny telephony. Miaraka amin'ireo filokana roa lehibe ireo mampiseho izay atao hoe manavao sy manao risika hitondra traikefa hafa tsy mitovy amin'ny zavatra fantatsika ankehitriny.
1 Revolisiona amin'ny famolavolana finday
2 Samsung dia tena nahay notch
Revolisiona amin'ny famolavolana finday
Ary ny marina afaka mahazo ny olona iray leo leo kely noho izany tsy fisian'ny famoronana sy fahalianana izany amin'ny orinasa maro hanandrana na mety hitarika traikefa hafa amin'ny tsena. Apple dia mitondra ny "notch", toa io hevitra nalaina avy amin'ny toerana tsy fantatra io, ary manaraka azy ny olon-kafa ary avy eo miresaka raha manavao izy ireo, ahoana raha ny AI vaovao ary ahoana raha ny iray hafa ... Miala tsiny, nefa Ny hany zavatra vita dia ny mitondra ny tsena ary mametaka azy amin'ny zavatra mitovy.
Ora vitsy lasa izay, Samsung dia nanolotra iray amin'ireo filokana lehibe indrindra hanalavirana tanteraka ny tenany amin'ny fifaninanana. Nahavita izany finday mivalona ahafahantsika mandalo ny habeny miainga amin'ny telefaona mankany amin'ny takelaka mifanaraka amintsika. Ary manao izany tsy amin'ny endrika ihany toy ny tolo-kevitry ny famoronan-dRouyu, Raha tsy manambara ny fahatongavan'ny One UI, ny sosona anao manokana namboarina hamela anay hanokatra apps 3 ao anatin'io endrika takelaka findainao vaovao miforitra io.
Tsy vitan'ny hoe nahavita nametraka endrika hafa amin'ny endriny miaraka amin'ilay efijery aforitra izy, fa miaraka amin'izay dia mitondra One UI, interface tsara namboarina izay manome dikany bebe kokoa amin'io fahafaha-mifindra eo amin'ny efijery kely io na ilay lehibe kokoa.
Samsung dia tena nahay notch
Ary ny tena zava-misy, natahotra i Samsung fa hanaraka an'i Apple miaraka amin'ity notch ity ny rehetra, satria ankehitriny ny tsena dia tototry ny andian-telefaona avo lenta izay tsy misy voavonjy. Na Huawei, na Xiaomi na na LG amin'ny maro hafa. Nandeha tamin'ny fandoroana ny toerana izy rehetra hamela tsena mankaleo sy manjavozavo, izay nametrahany ny mololo nanapatapaka ny lamosin'ny rameva Google miaraka amin'ny Pixel 3 XL.
Afaka volana maromaro niala tamin'ny tsena mankaleo izahay, izay tsy misy orinasa lehibe mahay manavao, ho an'i Samsung hanapotika ny zava-drehetra amin'ny telefaona mivalona ary inona no ho Galaxy S10 miaraka amin'ny efijery "New Infinity" izay efijery anoloana manontolo; Efa niresaka izahay amin'ny fotoana tsy fahita firy ahoana ny marika koreanina nanafina ny fakantsary y ny sensor sensor amin'ny rantsan-tànana eo amin'ny efijery.
Telefaona iray… Tablety… Telefaona misokatra ho takelaka! # SDC18 pic.twitter.com/FgwpJPjqTn
- SAMSUNG DEVELOPERS (@samsung_dev) Novambra 7, 2018
Raha atao teny hafa, Samsung dia afaka andao hiala amin'ny fahasosoran'ny fanamarihana mankany amin'ny ho avy, efa nitazona an-tananay ilay efijery «New Infinity» sy ilay finday mivalona. Ary ambonin'izany dia navelany ny fifaninanana tamin'ny ovy mafana be teny an-tanan'izy ireo, ary izany, ahoana no tsy ahafantaran'izy ireo ny fanovana ny làlambe ho an'ny taona ho avy, dia hahita azy ireo tsy mahalala fomba izy ireo. sahy sy sahy tokoa manolotra finday avo lenta miaraka amin'ny notch manana Samsung miaraka amin'ny efijery rehetra?
Na ny tolo-kevitr'i Samsung ho an'ny elanelam-potoana dia tsy mitovy amin'ny hitantsika. Izy dia afaka manaram-po amin'ny fihodinana Ireo efijery Infinity-V, Infinity-U ary ny Infinity-O.
Samsung dia nanamboatra ny tsenan'ny finday. Ary inona no holazaina, momba ny firy aminareo no tsy maintsy mividy ny teknolojia ananany… Saingy lohahevitra iray hafa hifalifaliantsika amin'ny taona ho avy io rehefa manomboka amin'ny filokana ny ambiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Samsung dia manao hadalana amin'ny fifaninanana rehetra miaraka amin'ny "notch"
Ahoana ny fomba hamadihana ny Android ho Oneplus 6T